राजनिति शास्त्रमा स्नातकोत्तर रिमालको प्रदेश ‘ख’ को सभापतिमा उम्मेद्वारी घोषणा
सेतोपत्र डेस्क मंगलबार, भदौ २२, २०७८
झापा, भदौ २२ । नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन जारी रहँदा विभिन्न पदका लागि काँग्रेसका कार्यकर्ताहरुबाट उम्मेद्वारी घोषणा गर्ने क्रम चलिरहेको छ । महाधिवेशन अन्तर्गत नै झापा क्षेत्र नं. १ को प्रदेश क्षेत्र ‘ख’ को क्षेत्रिय सभापतिका लागि युवा नेता बिष्णु प्रसाद रिमालले उम्मेद्वारी घोषणा गर्नु भएको छ ।
सोमबार सेतोपत्र डटकमसंग कुराकानी गर्दै युवा नेता रिमालले प्रदेश ‘ख’ को क्षेत्रिय सभापतिमा आफुले उम्मेद्वारी दिने घोषणा गर्नु भएको हो । ‘काँग्रेसको संगठन बिस्तारका लागि मेरो उम्मेद्वारी हो’ नेता रिमालले भन्नुभयो, ‘मेरो जोस र जाँगर पार्टी संगठन निर्माणमा लगाउँछु ।’
आम चुनावमा नेपाली काँग्रेसका उम्मेद्वारलाई बिजयी गराउन पार्टी संगठनमा जुझारु ब्यक्तिहरुको आवश्यक पर्छ त्यसैले आफुले प्रदेश क्षेत्रिय सभपातिमा उम्मेद्वारी दिने निर्णय गरेको रिमालले बताउनु भयो ।
प्रदेश क्षेत्र ‘ख’ का सचिव समेत रहनु भएका रिमाल २०६२ सालमा काँग्रेसको क्रियशील सदस्य लिएर राजनितिमा सक्रिय हुनु भएको हो । त्यस अघि नै २०५७ सालमा नेपाल बिद्यार्थी संघको क्याम्पस इकाइ सभापति समेत भइसक्नु भएको छ ।
काँग्रेसको पार्टी संगठनमा अत्यन्तै जुझारु युवा नेताको छवी बनाउनु भएका रिमाल २०७२ सालमा काँग्रेसको क्षेत्रिय प्रतिनिधि तथा झापा क्षेत्र नं. १ को क्षेत्रिय समिति सदस्य मनोनित हुनु भएको थियो ।
संघियताको कार्यान्वयनसंगै २०७५ सालमा झापा क्षेत्र नं. १ ‘ख’ को क्षेत्रिय सचिव चयन हुनु भएका नेता रिमाल पार्टी संगठन निर्माणका लागि दिन र रात नभनी खट्न सक्ने नेताका रुपमा चिनिनु हुन्छ ।
राजनितिसंगै सामाजिक र ब्यवशायीक जीवनमा समेत सफल मानिनु भएका नेता रिमाल युनिक इंग्लिस बोर्डिङ स्कुल मेचीनगर १२ सहरेडाँगीका एकल सञ्चालक तथा संस्थापक प्रिन्सिपल समेत हुनुहुन्छ ।
बिगतमा पत्रकारिता क्षेत्रमा समेत सक्रिय रिमालका हाल पनि विभिन्न पत्रत्रिकामा समसामयिक बिषयमा लेख प्रकासित भइरहेका हुन्छन । राजनिति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नु भएका नेता रिमाल अन्तराष्ट्रिय कुटनितिमा बिद्या बारिधि अध्ययनरत हुुनुहुन्छ ।
झापा मेचीनगर १२ सहरेडाँगी निवासी युवा नेता रिमाल चारआली जेसीजका संस्थापक अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ । नेता रिमाल स्थानीयस्तरका विभिन्न संघ संस्थामा सहभागि हुनुहुन्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ २२, २०७८, ०७:४९:००